Famoahana naoty 9.0.5 | Vaovao, Shadowlands | WoW Guides | WoW Guides
Vaovao farany 9.0.5 naoty
Sofia Vigo | | About us, shadowlands
Ny fanavaozana ny 9.0.5 dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny rafitra sy valisoa, ny fanitsiana ny curiae sy ny angano, ary ny fanamboarana bibikely. Ny valor Points dia azo alaina ao amin'ny tranomaizina Mythic Keystone, izay ampiasaina hanatsarana ireo valisoa Mythic Keystone vaovao. Ny fanovana ny entana Curiae sy Legendary dia natao hanomezana anao safidy safidin'ny gameplay raha ny momba ny fanaovana hosoka sy ny fampiasana zavatra Legendary amin'ny toe-javatra manokana. Ho fanampin'izay, izahay koa dia mila matoky ny mpilalao fa ny curia izay mifanaraka amin'ny hatsaran-tarehin'izy ireo, ny fiaviany, na ny lafiny hafa amin'ny toetran'izy ireo no tena mahomby indrindra amin'ny fomba filalaon-dry zareo.
Tranomaizina sy fanafihana Entana sy valisoa
Entana angano Player vs. Player
Ny valanoranony Torghast, ny tilikambon'ny voaozona
Rindrambaiko WoW Companion
Mpanaradia an'i Kyrian Curia
Ny fahasalamana Kyrian Phalanx dia nitombo 16%.
Fanamarihana ho an'ny mpamorona: Phalanxes dia toa malemy kokoa noho ny Halberdiers, noho izany ny faharetana fanampiny dia hamela azy ireo hivoaka alohan'ny hamenoan'ny mpilalao ny ekipany.
Mpiara-dia amin'ny Curia an'ny Necromancers
Namaha olana iray izay tsy hamelezan'ny fahavalo an'ny Jagger Shoulderpads an'i Bone Smith Heirmir.
Ny hira malazan'ny Maldraxxus Plague Herald dia nohavaozina: izao dia manisy fahasimbana ny fahavalo marobe isaky ny manodidina.
Nitombo 40% ny fahombiazan'ny tsipelina Rencissa the Dynamo.
Ny fahombiazan'ny tsipelina Assembler Xertora dia nitombo 10%.
Ny fahombiazan'ny tsipelina Bolsonaja dia nitombo 20%.
Fanamarihana ho an'ny mpamorona: Nametraka olana maromaro izay nahatonga ny mpanohana Curia Necromancer tsy hiatrika ny fahavoazany kasaina hatao amin'ny fotoana rehetra. Ankoatr'izay, ny ekipa sasany dia nahazo fanavaozana mifanaraka amin'ny anjara asany.
Ny mpanaradia ny curia an'ny sylph amin'ny alina
Ny fahombiazan'ny tsipelina Qadarin dia nitombo 24%.
Ny fihenan'ny aladditch dia ampiharina amin'ny fahavalo, araka ny tokony ho izy.
Ny fahasalaman'i Yira'lya dia nitombo 16% ary ny fahombiazan'ny tsipelina 50%.
Niakatra 20% ny fahasalaman'i Hojanoche ary 25% ny fahaizany tsipelina.
Ny fahasalaman'i Lloth'wellyn dia nitombo 33% ary ny fahaizany simba 25%.
Fanamarihana ho an'ny mpamorona: Ny mpiara-miasa vitsivitsy amin'ny sylphs curia amin'ny alina dia tsy nifanaraka tamin'ny andraikiny avy araka ny tadiavinay. Mba hamahana izany dia nanatsara ny fahaizanay maro izahay ary nampihena ny fahalemen'ny sasany amin'ireo namana ireo.
Ireo mpanaradia an'i curia venthyr
Ny fanafihana Venthyr Nightblade dia nitombo 25%.
Fanamarihana ho an'ny mpamorona: Amin'ny ankapobeny, faly izahay tamin'ny valin'ny fanovana Venthyr tamin'ny Content Update 9.0.2, fa izahay kosa te hanampy ireo mpilalao mampiasa nightblades amin'ny fanamboaran'izy ireo bebe kokoa.
Ny akanjon'ny tsy maty dia ho tonta toy ny Forsaken izay mitafy azy.
VFX ho an'ny Fanamasinana an'i Ashen (Venthyr Paladin), Limbo maharikoriko (Necromancer Death Knight), Fofon-trondro mitambatra (Venthyr Death Knight), Quota of Death (Night Sylph Death Knight), Spirits Wild (Sylph Hunter) Nightmare), Echoing Arrow (Kyrian Hunter ), ary ny Replica taloha (Night Sylph Warrior) dia tsy hamaly ny mpilalao mpiara-dia amin'ny tranomaizina sy ny bemidina. Ireo fanovana ireo dia mbola dinihina ary mety tsy ho farany.
Fahaiza-manao marobe izao no mahomby kokoa amin'ny fisorohana ny fahavalo izay tsy atrehin'ilay mpilalao mandritra ny ady (oh: Summon Spirits, Meteor Shower, Chain Harvest, Fel Bombardment, na Havoc Divine).
Namaha olana iray izay handevanan'ny Spell Reflection ny talenta Relentless Strike.
manaja ny masina
Namaha olana iray izay tsy misy fiatraikany amin'ny lehiben'ny fanafihana lehibe ny talenta Unholy Pact indraindray.
Faculties an'ny curiae
Ny fahasimban'ny Chain the Unworthy (Kyrians) dia nitombo 15% ary ny fihenan'ny debuff dia nitombo hatramin'ny 8% (dia 5%).
Abimbable Limb (Necromancers) dia miatrika fahasimbana ary misarika ny fahavalo raha mbola eo am-pelatanan'ny vahoaka ny Death Knight.
Abimbable Limb (Necromancers) dia tsy mahasarika fahavalo mangalatra intsony.
Ny debuff Reduction Reduction sy ny buff Strength avy amin'ny Quota of Death (Night Sylphs) dia nitombo ho 2% (dia 1%). Ny ody izao dia miangona hatramin'ny in-4 (dia 8).
Chaos Unleashed talenta simba nitombo ho 500% (dia 300%).
Ny fahasimban'ny didim-panjakana Elisian (Kyrians) dia nihena ho 10%.
Flamegrass (Necromancers) dia nohavaozina: ny fahaizanao manimba dia manana fotoana hiantsoana demonia avy amin'ny Theatre of Pain mandritra ny 25 seg. Ny fanipazana an'i Glaive dia manimba ny demonia, izay mipoaka rehefa novonoina. Ny fipoahana dia manimba ny fahavalo eo akaiky eo ary manasitrana anao amin'ny 30% amin'ny fahasalamanao farany ambony. Rehefa misy tanjona mihoatra ny 5, dia mihena ny fahasimbana.
Ny fahasimban'ny Hunt (Night Sylphs) amin'ny Vengeance Demon Hunters dia nahena 10%.
Marka mpanota (venthyr) manimba ny Vengeance Demon Hunters dia nihena 10%.
15% (dia 25%) ny fahasimban'ny base Decret (Kyrians).
Fel Defender izao dia misy fiatraikany amin'i Fel Ravage (dia Fiery Mark) ho an'ny Vengeance Demon Hunters.
Ny fitazonana demonia dia tsy hitaona ny zava-boary hiady intsony rehefa tapitra ny fonja.
Ny fanasitranana tsindraindray dia nitombo 12%.
Ny fanasitranana ny fitomboan'ny ala dia nitombo 7%.
Ny fahasimbana atrehana sy ny fanasitranana nataon'ny Adaptive Swarm (Necromancers) dia nitombo 25%. Ankoatr'izay, ny fahombiazan'ny vokany ara-potoana dia nitombo ho 25% (dia 20%) ary 35% ho an'ny Balance druids.
Infinite Thirst (Venthyr) izao dia mampitombo ny voka-dratsin'ny fikomiana isaky ny stack amin'ny laharana 1 hatramin'ny 0,8% (dia 0,5%).
Namboarina bibikely izay nahafahan'ny mpihaza hisoroka ny debuff Sated rehefa mandefa Primal Rage.
Nanamboatra bug izay nahatonga ny Fahafatesana Feign ho nofoanana rehefa nampiasa ny sari-tany na fihetsem-po ny mpihaza.
Ny fahasimban'ny talenta Cobra dia nitombo 260%.
Namboarina bibikely izay rehefa nandefa ny talenta Salva aorian'ny Aimed Shot izay natombok'i Trick Shots dia tsy hampiharina ny vokatry ny Trick Shots.
Namaha olana iray izay ahafahan'ny talenta Steel Trap ampiasaina amin'ny Aspect of the Turtle miasa.
Namboarina bibikely izay mety hisakana ny Echoing Arrow (Kyrians) tsy hamoaka ao ambadiky ny toetrany.
Ny fahasimban'ny Death Chakram (Necromancer) dia nitombo 15%.
Ny faharetan'ny Flayer Shot (venthyr) dia nitombo hatramin'ny 18 segondra (dia 14 segondra) ary tsy mandoa intsony ny fifantohana (dia 10 teo aloha). Mark of the Flayer dia mampitombo ihany koa ny fahasimban'ny Kill Shot manaraka amin'ny 25%.
Namboarina bibikely izay indraindray mahatonga ny Marksman Perk buff esorina raha misy mpilalao hafa mametraka an'i Hunter's Mark.
Namboarina bibikely izay indraindray mahatonga ny Brutal Missiles hamarana aloha loatra.
Ny fahasimban'ny Radiant Spark (Kyrians) dia nitombo 20%.
Natosiky ny Fahafatesana (Necromancers) ny faharetany dia nitombo hatramin'ny 25 segondra (dia 20 segondra) ary ny herin'ny tsipelina dia nitombo ho 15% (dia 10%).
Fitaratra fampijaliana (venthyr)
Arcane: manome tahiry mpilalao maimaim-poana (tsy mana) intsony izao, rehefa fitaratra no lany.
Afo: ny fihenan'ny cooldown Fire Blast dia nitombo hatramin'ny 6 segondra (dia 4 segondra).
Vivify izao dia mitentina 3,8% amin'ny mana (dia 4,1%).
Ny fanavaozana ny zavona izao dia mitentina 1,8% amin'ny mana (dia 2,2%).
Xuen the White Tiger dia mora tohina amin'ny valin'ny fanaraha-mason'ny vahoaka Hibernate, Polymorph, ary Fear.
Ny Touch of Death izao dia voakasiky ny fifehezana: Combo grevy.
Namaha olana iray izay handravan'ireo Storm, Earth, and Fire indraindray ny fahavalo akaiky.
Namaha olana iray izay ahafahan'ny Xuen the White Tiger mikendry fahavalo am-pitokisana.
Namboarina bibikely izay nahatonga an'i Tiger Palm hanome tombo-kase fanampiny an'ny Mark of the Crane miaraka amin'i Storm, Earth and Fire
Namboarina bibikely izay namela an'i Mark of the Crane hitazona maharitra indrindra ny stacks raha miady amin'ny tanjona tokana.
Namboarina bibikely izay afaka misoroka ny fanahin'ny Storm, Earth, and Fire tsy hampiasa Fists of Fury, Rising Sun Kick, ary ilay talenta Dragon Spinning Punch.
Namboarina bibikely izay namela ny fanahin'ny Rivo-doza, ny Tany ary ny Afo hanohy ny fandefasana ireo totohondry fahatezerana taorian'ny nifaranan'ny fandefasana ny Monk's Fists of Fury.
Namaha olana iray izay mety hahatonga ny Crane's Mark tsy hampitombo tsara ny fahasimban'ny Crane's Spinning Kick raha toa ka maty ny tanjona miaraka amin'ny Monk's Mark.
Namaha olana iray izay tsy hiatrehan'ny Silfeline Stomp (Night Sylphs) fahasimbana raha ampiasaina hampiditra zavaboary efa miady.
Fallen Order Tiger sy Ox (Venthyr) ny statistes Fallen Adepts dia nitombo 20%.
Holy Shock izao dia mitentina 16% amin'ny mana (14%).
Ny fanasitranana an'i Burning Defender dia misy effets visuels.
Vanquisher's Hammer (Necromancers) dia mamokatra 1 ankehitriny. ny fahefana masina rehefa ampiasaina.
Ny ozona bonus Clarity (Kyrian) dia manana tahan'ny fanafihana ambany kokoa ankehitriny. Ho fanampin'izany, ny faritra misy ny fiatraikan'ny vokam-pitsarana vokatry ny Divay Havoc dia tsy ahena 25% intsony ao amin'ny PvP, fa ny vokatry ny Fitsarana rehefa naterak'i Echoing Clarity dia.
Ny Order Virtuous dia tsy milalao fampihetsiketsehana fanafihana rehefa nateraka.
Namaha olana iray izay tsy hamelezan'ny fanapahan-kevitry ny Templar ny Vidication Templar ny fanapotehana miorina amin'ny didim-pitsarana navoakan'ny Templar voalohany.
Ny talenta Spirit Shell izao dia mandray ny 80% amin'ny fanasitranana vita (dia 100%). Ho fanampin'izany, ny fatran'ny tsindrona dia miankina amin'ny herin'ny tsipelina fa tsy amin'ny fahasalamany faratampony.
Ny Hira masina dia mampitombo ny fanasitranana voaray 4% (10%) nandritra ny 15 segondra (dia 8 segondra). Mifangaroharo hatramin'ny in-5 (fa tsy miangona).
Fifehezana: Ny shadowweave dia tsy mandray tombony imbetsaka amin'ny vokatra mampitombo ny fahasimbana.
Ny Shadow Apparitions dia tsy miteraka lasibatra intsony amin'ny tanjona raha tsy mahavita fahasimbana izy ireo.
Guardian Sylphs (Night Sylphs): Guardian Fairy dia manome 20% ny fihenan'ny fahasimbana (dia 10%) ary ny Wrathful Fairy dia mandeha ho azy amin'ny tanjon'ny fahavalo akaiky indrindra raha mampiasa Guardian Sylphs miaraka amin'ny mpiara-miasa voafantina.
Wrathful Fairy (Night Sylphs) izao dia manome loharano ho an'ny pretra mpanary rehefa maro ny vokatra Wrathful Fairy no mazàna amin'ny tanjona.
Mind Games (venthyr) dia tsy mamadika ny simba na ny fanasitranana intsony rehefa hita taratra.
Sylph Pilot (Night Sylphs): Ny Guardian Sylphs dia mamela tahadikan'ny buff mahomby amin'ny 80% (dia 60%) ary tsy afaka miangona miaraka amin'ny angano amin'ny buffs roa.
Haavo 56 - New Passive: Hafohy: ny poizina dia manitatra ny faharetan'ny Mincemeat hatramin'ny 3 segondra isaky ny teboka combo lany.
Ny ratra voapoizina dia mamerina amin'ny laoniny 8. angovo (raha tokony ho 7).
Dice Mince (Laharana 2) dia nesorina.
Namboarina bibikely izay nanakana ny talenta Crimson Tempest tsy hampihetsika ny talenta Alacrity.
Nanamboatra bug izay namela ny talenta Poison Bomb hiatrika fahasimbana amin'ireo lasibatra voan'ny Bash nefa tsy nanelingelina ny fifehezana ny valalabemandry.
Namaha olana iray izay tsy dia ampiharina matetika ny talenta Premeditation rehefa mangalatra.
Namaha olana iray izay ampiharan'i Echoing Rebuke (Kyrians) ny Discover Weakness amin'ny rogues hafa fa tsy ny Subtlety raha toa ka mangalatra.
Ny fahasimbana voalohany an'ny Jagged Bone Spike (Necromancers) dia nitombo 300%, ary manome 1 ankehitriny. bonus combo ary iray fanampiny ho an'ny tsipika taolana mavitrika aorian'ny nahavoa ny tanjona.
Nesorina izao ny Jagged Bone Spike (Necromancers) rehefa miala ny ady. Ankoatr'izay dia tsy mamerina sarany izany ary esorina rehefa sitrana tanteraka ilay lasibatra.
Namboarina bibikely izay nanakana ny fahasimbana voalohany nataon'i Jagged Bone Spike (Necromancers) amin'ny fiatrehana ny laza ratsy.
Namboarina bibikely izay nanakana ny debuff an'i Jagged Bone Spike tsy hanisa ny fahavoazan'ny bonus Poison avy amin'ny hery angano Apocalyptic Blade.
Ny fahasimban'ny Jagged Bone Spike (Necromancers) dia nitombo araka ny tokony ho izy miaraka amin'ny Mastery: Potent Assassin avy amin'ny specialization Assassination.
Ny talenta an'i Outlaw Barrage izao dia mahatonga ny Sepsis (Night Sylphs) hiteraka teboka combo fanampiny, araka ny tokony ho izy.
Tsy mandany vola amin'ny angovo intsony ny Flagellation (Venthyr) (20 Energy), nahena ho 12 segaondra (20 segondra) ny faharetany, ampiharina avy hatrany ny fahamaimaizany ary tsy manana activation faharoa intsony. Ho fanampin'izay, ny fahasimbana voalohany dia nitombo 270%, ny fahasimban'ny bonus amin'ny fandaniana teboka combo 160%, ary maharesy ny simba in-1 (dia 3) rehefa ampiasaina.
Lash Scars (venthyr) izao dia mamely kapoka 4 fanampiny (dia 2). Io dia hahafahan'ny rogues manomboka amin'ny haingam-pandeha 5% rehefa alefa.
Nanamboatra bug izay nahatonga ny tempt Luck buff nesorina rehefa nifarana ny Luck Buff rehetra.
Ny fahasimban'ny tselatra dia nitombo 35%.
Ny fahasimban'ny Lightning Shield dia nitombo 415%.
Ny fahasimban'ny Earth Shock dia nitombo 30%.
Ny fahasimban'ny horohorontany dia nitombo 70%.
Ny fahasimban'ny Lava Beam dia nitombo 35%.
Nihena 10% ny fahasimban'ny Lava Burst.
Ny fahasimban'ny Lava Lash dia nitombo 40%.
Ny talenta Storm Guard izao dia mampitombo ny fahasimban'ny Chain Lightning amin'ny 300% (dia nitombo 150% tamin'ny famafazana 2 an'ny Lightning Bolt).
Stormscaller dia mety hiteraka ny talenta Ice Strike sy Split, araka ny kasaina.
Namaha olana iray izay nahatonga ny talenta Storm Guard sy Maelstrom Weapon hampiakatra ny fahasimban'ny Chain Lightning miaraka amin'izay.
Namaha olana iray izay ahafahan'ny talenta Earth Wall Totem mandray fahasimbana bebe kokoa noho ny natao raha nisy faritra nisy tsipelina vokany teo amin'ireo mpiara-dia maro.
Ny fahasimbana natrehana ary ny fanasitranana nataon'ny Vespers Bell Totem (Kyrians) dia nitombo 25%.
Ny fahasimbana nataon'ny Sylph Transfusion (Night Sylphs) dia nitombo 25%, ny fanasitranana azy ireo tamin'ny fanovana ny fahasimbana ho 60% (dia 40%), ary ny fahasitranany nanamboatra 20 yds (dia 12 m).
Fanatsarana ny Primal Surge (Necromancers): ny vokan'ny Lightning Bolt dia mahatratra 150% ny fahasimbana (100%).
Namaha olana iray izay tsy ahafahan'ny Primal Surge (Necromancers) ampiasaina amin'ny mpiara-miasa amin'ny mavitrika Mercenary Mode.
Ny fihenan'ny fahasimbana sy ny fanasitranana nataon'ny Chain Harvest (venthyr) ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny Shamans and Elementals dia nitombo 15%.
Chain Harvest (venthyr) izao dia hanazava ny bara fihetsika rehefa avy hatrany dia nalefan'i Maelstrom Weapon.
Ny fanozonana ny lela izao dia maharitra 1 minitra (30 segondra) ary 20 segondra hanohitra ny mpilalao fahavalo (12 segondra).
Ny Malefic Ecstasy dia tsy miteraka lasibatra intsony hanaparitahana ny halatra raha tsy misy fahasimbana.
Ny Seed of Corruption dia miatrika ny fahavoazana ananany ary mampihatra ny kolikoly raha mipoaka ny voa raha toa ka eo ambany fanaraha-mason'ny vahoaka ny Warlock.
Ireto zavaboary nantsoina manaraka ireto dia mankatò ny baiko voalohany momba ny biby: Terror Slayers, Demon Tyrants, Fel Evils, Nether Portal Demons, ary Grimoire Fel Guards: Fel Guard.
Niakatra 10% ny hery fanafihana Call Dreadstalkers, nitombo 10% ny Terror Bite ary ny Dread Lash.
Fifehezana: ny angovo mikorontana izao dia mampitombo ny fahasimban'ny kolikoly.
Ny Shattering Tithe (Kyrians) dia mitaky ny Warlock hiatrika ny tanjona.
Ny bonus fahasimbana noho ny tsy fahasalamana ara-pahasalamana amin'ny tanjona Exterminating Bolt (Necromancer) dia nitombo ho 100% (dia 60%).
Ny simba vokarin'ny Loza mananontanona (venthyr) raha nifindra nankany amin'ilay kendrena dia nitombo 10% ary ny fahavoazany rehefa nipoaka 15%.
Ny loza mananontanona (venthyr) dia tsy miatrika fahasimbana amin'ny totem-by intsony mankany amin'ilay kendrena.
Namaha olana iray izay ahafahan'ny Intervene ampiharina amin'ireo lasibatra vokatry ny rivodoza.
Namboarina bibikely izay nanakana ny buff Whirlwind tsy ampiharina amin'ny Warrior raha toa ka alefa mandritra ny Charge i Whirlwind.
Ny fahasimban'ny fahaiza-manao rehetra dia nitombo 10%. Ny fahasimban'ny Thunderclap dia nitombo 10% fanampiny.
Ny sain'ny mpandresy (Necromancers) dia nohavaozina: alao ny Banner an'ny mpandresy, omena anao sy ireo mpiara-dia aminao akaiky indrindra 2. Ny fifehezana ary ny hafainganam-pandehan'ny bonus 400%, ary koa ny fisorohana ny hafainganam-pandehan'ny hetsika tsy hianjera ambanin'ny 30%. Ny cooldown azy izao dia 100 min (dia 2 min), ny faharetany dia 3 segondra (dia 15 segondra), ary ny taranaka Rage dia 20. isan-tsegondra ho an'ny fitaovam-piadiana sy fiarovana, ary 4 p. isan-tsegondra ho an'ny Fury.
Reputation Veteran (Necromancers) dia tsy mahatonga ny Banner Conqueror hanome voninahitra voninahitra intsony.
Faculty of curia
Ny nofo noforonina dia nohavaozina: Mamorona ampinga nofo sy taolana ianao mandritra ny 3 segondra (dia 4 segondra) izay mitelina fahasimbana mitovy amin'ny 40% amin'ny fahasalamanao fatratra mandritra ny 2 minitra. Mandritra ny fandefasana azy dia mihena 20% ny fahavoazana azonao. Voka-dratsy: Ny fanatonana ny fatin'ny fahavalo dia mandany ny Esetany, mampihena ny coordown an'ny Meat Shape 1 segondra.
Ny slime ao amin'ny tranomaizina Plaguebringer izao dia hanome ny tombony azony rehefa mandany ny fatin'izy ireo ny vokadratsin'ny Shape Meat (fa tsy rehefa mampiasa Shape Meat amin'ny faty).
Ny Solvent miovaova (mpamorona Pesta Marileth) dia manomboka izao rehefa ny effets passive an'i Shape Meat dia mandany ny votoatin'ny fatana (fa tsy rehefa manary Meat Shape).
Ingenious Meat Shaping (Heirmir Bone Smith) dia nohavaozina: Rehefa mandany faty ny vokadratsy Meat Shaping dia ahena 1 segondra fanampiny ny zaratan'i Shaping Meat.
Mpampita Anima: Hery mikoriana - Tranon'ny fombafomba
Skeleton Control izao dia miantso taolam-paty iray rehefa mandany faty ny vokatry ny endrika Shaping Meat. Ity vokatra ity dia manana cooldown 5 segondra eo anelanelan'ny tsirairay Skeleton Summon.
Sylphs amin'ny alina
Ireo fanahy izay monina ao amin'ny Greenhouse an'ny Queen's dia maniry ny hiverina amin'ny fiainana ary hanome ny valisoany ho an'ny mpilalao ankehitriny nefa tsy mila miresaka amin'izy ireo aloha.
Namaha olana iray izay ho faty indraindray ny mpilalao mandritra ny Pod Keeper (Dreamweaver) raha toa ka be ny fahasimbana avy amin'ny knockout.
Ny lapan'ny Embers
Ireo vahiny hahatratraranao ny namanao indrindra dia hanome anao RSVP maharitra.
Ny RSVP maharitra dia hamela anao hanasa an'io olona io any amin'ny Ember Court miaraka amin'ny tarehin-tsoratra rehetra ao amin'ny kaontinao nefa tsy mila mamita ny iraka RSVP indray miaraka aminy.
Rehefa mahatratra ny haavo avo laza miaraka amin'ny Ember Court, dia azo atao izao ny mividy boky avy any Temel ao Sin Leap izay mifamatotra amin'ny kaonty. Ity boky ity dia ampiasaina hampianarana ny Dredger Steward anao amin'ny fomba fanatanterahana ny asa fanadiovana sy famerenana amin'ny laoniny izay manaraka ny Ember Courts.
Temel sy Lady Ilinca dia tsy hiseho intsony raha vao nianatra.
Tsy mitaky mpilalao hiditra ao amin'ny Bastion sy i Maldraxxus intsony i Droman Aliothe RSVP.
Nanamboatra bug izay namela ny serivisy Stone (General Draven) hajanona.
Tranomaizina sy fanafihana
Natstone mahatoky izao dia maharitra 45 segondra (dia 30 segondra) raha toa ka ampiasain'ny mpilalao Venthyr.
Ny fahasimban'i Natstone Faithful dia nihena 50% rehefa nanintona, ary ny faharetan'ny Natstone Blessing dia nitombo 45 segondra (30 segondra).
Anima Cage izao dia maharitra 1 minitra aorian'ny fampandehanana (45 segondra). Raha mavitrika dia ampiharina amin'ny mpilalao ny Sin Leap's Blessing rehefa misy fahavalo maty eo akaiky eo (fa tsy ny fahavalo sasany fotsiny no tratra), ary ny fe-potoana dia nitombo ho 75 segondra (60 segondra).
Ny iray amin'ireo tranom-borona mpiambina dia nafindra hiala ny efitrano fanaovana fisafoana.
Fonja goavam-be mythic
Ny lojika mamaritra ny haavon'ny Mythic Keystone voalohany izay raisin'ireo mpilalao isan-kerinandro dia novaina.
Talohan'izay, ny mpilalao dia nahazo vato ifaharana iray ambaratonga ambany kokoa noho ny avo indrindra vitany hatramin'ny Season 1.
Aorian'ity fanovana ity dia hitohy hihena amin'ny ambaratonga iray isan-kerinandro ny haavon'ny vato ifaharana mandra-pahavitan'ny mpilalao vato ifaharana ambony kokoa.
Ohatra, ny mpilalao iray nahavita vato ifaharana ambaratonga 15 dia hahazo vato ifaharana 14 ambaratonga manaraka. Raha tsy mahavita vato ifaharan'ny ambaratonga 15 na avo kokoa ianao mandritra io herinandro io dia hahazo vato ifaharan'ny ambaratonga 13 ny herinandro manaraka.
Ny mpamono rà mandriaka dia tsy mitarika intsony ny fametahana Necrotic.
Gauntlet an'ny jeneraly Kaal
Stonewall Gargons dia tsy mitarika intsony ny fametahana Necrotic.
Entana sy valisoa
Ny Wandering Ancestor, ilay tendrombohitra nofidian'ny fiarahamonina, dia azo alaina izao!
Ny fitaovana azo avy amin'ny Mythic Keystone Dungeons dia azo havaozina miaraka amin'i Valor, vola vaovao azo amin'ny famitana ny tranomaizina Mythic Keystone sy ny fiantsoana an'i Curia. Ny satroka isan-kerinandro dia hanomboka amin'ny herinandro voalohany amin'ny 5000 p. manome lanja ary hampitombo 750 p hafa. isan-kerinandro. Ny endri-tsoratra tsirairay dia afaka mamonjy isa faratampony 1500. sarobidy amin'ny fotoana rehetra. Fitaovana azo alohan'ny patch tsy azo havaozina.
Item haavo 200: Haavo fanavaozana ny entana voalohany.
Item haavo 207: Mitaky ny zava-bita "Cornerstone Expeditionary", azo tamin'ny famitana ny tranomaizina valo an'ny shadowlands amin'ny angano ambaratonga 5 na mihoatra ao anatin'ny fe-potoana.
Item haavo 213: Mitaky ny zava-bita "Mpandresy ny vato fehizoro", azo tamin'ny famitana ny tranomaizina valo an'ny shadowlands amin'ny angano ambaratonga 10 na mihoatra ao anatin'ny fe-potoana.
Item haavo 220: Mitaky ny zava-bita "Master of the Keystone", azo tamin'ny famitana ny tranomaizina valo an'ny shadowlands amin'ny angano ambaratonga 15 na mihoatra ao anatin'ny fe-potoana.
Ny famitana ny tranomaizina Mythic Keystone rehefa tapitra ny fotoana dia manome zavatra faharoa ho valisoa. Ny haavon'ity entana ity dia somary ambany kokoa (oh: ny famitana tranomaizina Mythic Keystone ao amin'ny Mythic level 7 izao, fa raha tsy misy fotoana, dia omena ny ambaratonga 200 ny singa sy ny entana 197)
Ny fepetra takiana amin'ny Great Chamber Raid Loot dia mandresy ny 3/6/9 Raid Bosses (dia 3/7/10).
Azo alaina ao amin'ny Castle Castle Nathria koa izao ny Power Conduits.
Ankehitriny rehefa tonga amin'ny Renown Level 40 miaraka amin'i Curia ny mpilalao, ny fikatsahana isan-kerinandro hanangona 1000 p. ny loka Anima dia volamena 1500.
Rehefa mandray ny isan'ny fanahy be indrindra ho an'ny curia ny mpilalao dia manome 500 izao ny fikatsahana isan-kerinandro hamonjy fanahy avy any Maw. ny fanahy.
Ny solomaso solomaso Jeweled izao dia azo ampiasaina amin'ny famoahana aretina, ary hiseho ao amin'ny fanangonana ny mpilalao raha vantany vao hita izy ireo.
Ny vidin'ny mpivarotra dia namboarina ho an'ireo zavatra ambany haavo 75.
Ny enchantment fitaovam-piadiana Mahery Maizina dia tsy ho lasibatra amin'ny fahavalo tsy hiady na hisy fiantraikany amin'ny fanaraha-maso ataon'ny vahoaka.
Ny Pack Hunger trinket dia manome ny stat hafainganana fa tsy isan-jaton'ny hafainganam-pandehan'ny hetsika.
Ny kilalao mpanamboatra sakana dia tsy azo ampiasaina amin'ny tranga PvP intsony.
Sary sokitra sary sokitra Rune
Terrormonas izao dia manome maimaika 10% raha any amin'ny Fahafatesana sy ny fahalovana (dia 8%).
Crimson Rune Weapon dia mahatonga ny Dancing Rune Weapon hamokatra fiampangana 5 an'ny Bone Shield ary hampihena ny cooldown an'ny Dancing Rune Weapon 5 segondra (dia 3 segondra).
Vampiric Aura izao dia mampitombo ny faharetan'ny Rà Vampiric amin'ny 3 sec ary manome 5% hanonitra raha mbola miasa izy io.
Sanguino Domination izao dia manome 45 ihany koa. ny herin'ny runic rehefa mampiasa Ra Vampiric.
Ny fahasimbana nipoaka Revep Creep dia nitombo 5% ary ankehitriny dia miteraka manodidina ny 1,75 min (dia 1,5 min).
Ny faharetan'i Fel Bombardment dia nitombo hatramin'ny 40 segondra (dia 30 segondra) ary ny vintana naterak'izy ireo dia nitombo hatramin'ny 5%.
Ny fahafaha-mitarika Dark Gaze Medallion dia nitombo hatramin'ny 40% (dia 20%), ary ankehitriny dia mamerina ihany koa ny fahatezeran'ireo mpilalao ozona Eye Beam na Fel Ravage.
Ny fahasimban'ny ratra may dia nitombo 100% ary ny immolation Aura dia 65% (dia 50%).
Ny tsikombakomba nataon'ny Eye Beam nataon'ny mpiara-dia voaantso amin'ny Collective Anguish dia malaza foana.
Fiery Mark ny fahasimbana eo noho eo an'ny Spirit of the Dark Flame dia nitombo 20% (dia 15%).
sakadia ireo saka
Ny Cat Bibelot an'ny Cat's izao dia mamerina ny angovo 30% (dia 25%).
Ny vokan'ny roa an'ny Frenzy dia nitombo 50%.
Toolkit an'ny Sleeper's Legacy Rage izao dia manondro fa ny druid dia tsy voaro amin'ny vokatry ny fanaraha-maso ataon'ny vahoaka raha miasa.
Verdant Infusion dia manitatra ny faharetan'ny vokatra fanasitranana ataonao mandritra ny fotoana mandeha amin'ny tanjona Swift Mend 10 segondra (dia 8 segondra).
Dire Order izao dia manana vintana 30% hiteraka (dia 20%).
Piercing Fangs of Stalkerrylaks simba dia nitombo 35% (dia 20%).
Flamewaker Cobra Sting izao dia manana vahana 50% hiteraka (dia 25%).
Qa'pla, Order of War ao Eredun izao dia mamerina ny cooldown ao Kill (fa tsy mampihena ny cooldown amin'ny 5 segondra) ary misy vokany passive fanampiny: Barbed Shot dia miteraka fahasimbana 10% bebe kokoa.
Pop Shot izao dia mahatonga ny Rapid Fire hiatrika fahasimbana fanampiny 35% (dia 25%).
Ny True Focus an'ny Eagle Claw dia mampitombo ny faharetan'ny Hit Shot amin'ny 3s ankehitriny ary mampihena ny vidin'ny fifantohana rehetra amin'ny 25% (50%).
Snakestalker's Ruse izao dia tsy mandrisika intsony ny fahaizan'ny Night Sylphs Wild Spirits in-droa.
Ny fahasimban'ny Latent Poison Injectors dia nitombo 15%.
Ny fifehezana ny fitsipi-pifehezana izao dia mampitombo ny fahasimbana mahatsiravina amin'ny 20% (dia 15%).
Ny fampihetseham-pototra isa-minitra dia nitombo tamin'ny 2 (dia 1,66).
Ny fahasimban'ny Arcane Harmony isaky ny stack dia nitombo hatramin'ny 8% (dia 7%) ary ny vokany dia nitombo hatramin'ny 18 heny (dia 15).
Molten Skysunter izao dia miantso meteor rehefa avy nitifitra an'i Fireball na Pyroblast in-18 (dia in-25).
Ny Blessing of the Sun King dia mitaky ny Hot Streak ho lany in-8 (dia 12) ary manome ny Fandoroana 6 segondra (dia 5 segondra).
Cold Front izao dia miantso Frozen Orb aorian'ny fandefasana an'i Frostbolt na Flurry in-30 (dia 60).
Ny hatsiaka mangatsiaka izao dia miteraka rantsan-tànan'ny fanala isaky ny 2 segondra (dia 3 segondra).
Ny an'i Shaohao's Might dia mahatonga ny Tiger Palm hanana 40% (dia 10%) hiatrika 300% ny fahasimbana ara-dalàna (dia 250%) ary hampihena ny cooldown sisa tavela amin'ny concoctions 2 extra s (fa tsy 1 s).
Mighty Pour izao dia mampiakatra ny 50% ny fiadianao (25%) mandritra ny 8 segondra (ary 7 segondra) ary ny Cleansing Brew dia manana 35% tsy ahazoana mandoa vola (25%).
Ny fanasitranana ny fifantohana manjavozavo dia nitombo 20% (dia 15%) ary ny vidin'ny mana nidina 20% (dia 15%).
Ny vintana fitokonana nataon'i Xuen's Battlegear dia nitombo 50% (30%) ary ny cooldown an'ny Fists of Fury dia nihena 5 segondra (2,5 segondra).
Vanguard Momentum dia mampitombo ny fahasimbana masina atrehana 4% (dia 3%) nandritra ny 10 segondra (dia 8 segondra).
Ny faharetan'ny Dawn sy Dusk buff dia nitombo hatramin'ny 12 segondra (dia 8 segondra) ary ny Blessing of Dusk dia nihena ho 4% (dia 3%).
Sunwell Inflorescence izao dia mampitombo ny vokatry ny Light Infusion amin'ny 30% (dia 20%).
Ny faharetan'ny buff an'ny Shadowbreaker, Dawn of the Sun, dia nitombo hatramin'ny 8 segondra (dia 6 segondra)
Ny bonus fanasitranana izay nomen'i Maraad's Last Breath ho an'ny Martyr's Light dia tsy mampitombo ny fahasimban'ny tena intsony. Ankoatr'izay, ny fahafatesan'ny Mara's Deathrattle dia mahatonga ny fahavoazana manimba ny tenan'ny Maritiora nandritra ny 5 segondra.
Reddening Protector's Sanctum dia nohavaozina: Rehefa manavotra anao amin'ny fahafatesana i Burning Defender dia mamerina fahasalamana 40% fanampiny izy. Rehefa mifarana ny Burning Defender nefa tsy manavotra anao amin'ny fahafatesana dia mampihena 40% ny sisa tavela aminy (60%).
Namaha olana tamin'ny Burnt Protector's Sanctum izay nahatonga an'i Burning Defender hametraka ny Burning Defender an'ny paladins Protection teo akaiky teo.
Namboarina bibikely izay nahatonga ny didim-pitsarana ho an'ny Magistrate ho lany rehefa nandefa Word of Glory maimaimpoana tamin'ny fampiasana Light Bright.
15% ny fahasimban'ny didim-pitsarana farany.
Ny Fitsarana Magistrate dia manome ny habetsaky ny fitambaran'ny Kroazada rehefa mandany ny Herin'ny Fanahy amin'ny vokatr'izany.
Ny fanasitranana ny Searing Shadows dia nitombo 36%, ary afaka manasitrana amin'ny fomba kritika ankehitriny.
Ny Searing Shadows dia azo ampifandraisina amin'ny Mastery: Grace.
Ny Kiss of Death dia mampihena ny cooldown an'ny Shadow Word: 12 segondra ny fahafatesany (dia 8 segondra).
Ny sary masina izao dia mandefa ny fahazavana Searing rehefa mampiasa Shadow Word: Fanaintainana na ny fahaizan'ny Venthyr Mind Games ary ny Holy Nova rehefa mampiasa ny fahaizan'ny Necromancer Unholy Nova. Ankoatr'izay, raha mijaly noho ny fanaraha-maso ataon'ny vahoaka ny pretra, dia hamoaka ody fanasitranana kendrena tokana amin'ireo olona akaiky ny fahasalamana ambany ny sary.
Ny cooldown amin'ny famosaviana nalaina avy tamin'ny Divine Image dia nesorina (oh: mifatotra amin'ny Shadow Word: Fahafatesana taorian'ny Afo Masina izao dia nandrehitra hazavana indroa).
Ny faharetan'ny Flash Focus buff dia nitombo hatramin'ny 20 segondra (dia 15 segondra).
Ny fisaintsainana voafetra dia nesorina izao rehefa manomboka fihaonana amin'ny arena.
Salama mpamaky fanaintainana izao dia miteraka hatramin'ny 30. Insanity (20 taona), ary afaka ampiarahina amin'ny talenta Death and Madness ankehitriny.
Ny fahasimban'ny Shadowflame Rift dia nitombo 40%.
Mark of the Master Assassin izao dia tsy misy fiantraikany amin'ny fanafihana fiara sy ny fikomiana noho ny fahaiza-manao ratsy.
Tiny Toxic Blade izao dia mahatonga an'i Punch hiatrika 500% nitombo ny fahasimbana (dia 350%).
Ny fihenan'ny Bloodfang Essence dia nitombo 30%.
Doom Blade izao dia mitaky 45% fanampiny fahasimban'ny ra (dia 30%).
Ny Dustpath Patch dia mampihena ny cooldown an'i Vendetta isaky ny 30. angovo lany (fa tsy isaky ny angovo 50)
Ny Talisman of Cunning dia mampitombo ny fahasimbana atrehana hatramin'ny 15% (dia 10%) ary maharitra hatramin'ny 12 segondra (dia 10 segondra).
Mimbres mainty hoditra izao dia mampitombo ny fahasimban'ny Pistol Shot manaraka anao amin'ny 300% (dia 200%).
Hidden Blunderbuss dia manana fotoana izao hanentanana ny Pistol Shot anao in-3 (dia 2).
Ny Rotten dia mahatonga ny Backstab hiatrika fahasimbana 50% bebe kokoa (dia 30%).
Ny Grave Shadows dia mampihena ny fahasimbana rehetra vita amin'ny 20% (dia 15%) nandritra ny 15 segondra (dia 12 segondra).
Ny akoan'ny Great Cataclysm izao dia mahatonga ny Horohorontany hiatrika 120% fanampiny fahasimbana (dia 175%).
Legacy of the Frost Witch dia mahatonga an'i Stormstrike hiatrika 30% nitombo ny fahasimbana (dia 15%).
Ny rivotry ny rivotra avy any Doom dia mitohy tsy misy fahafatesana intsony.
Jonathan's Fokusana voajanahary izao dia mampitombo ny vokatry ny Chain Heal manaraka amin'ny 20% (dia 10%).
Spiritwalker Tidal Totem dia mampihena ny vidin'ny mana-manasitrana Wave Wave sy Chain Heal hatramin'ny 40% (dia 25%).
Ny faharetan'i Evil Wrath dia nitombo hatramin'ny 10 segondra (dia 8 segondra) ary ny fahavoazany isaky ny stack dia nitombo 35% (dia 25%).
Ny fahatezeran'ny faharetan'ny fanjifana dia nitombo hatramin'ny 30 segondra (dia 20 segondra) ary ny fahasimbana ara-potoana dia nitombo hatramin'ny 6% (dia 5%).
Ny hatezerana amin'ny fanjifana dia mampitombo ny fahasimban'ny vokatra Shattering Tithe (Kyrians).
Ny faharetan'ny buff implosive Potential dia nitombo hatramin'ny 12 segondra (dia 8 segondra).
Ny Burly Spider's Flaming Core dia mampitombo ny fahasimban'ny Demon Bolt hatramin'ny 15% isaky ny stack (dia 8%).
Ny fihenan'ny antso an-tariby Ghoulish Inquisitor an'ny Dread dia nitombo hatramin'ny 4% isaky ny stack (dia 3%).
Ny faharetan'i Azj'Aqir Madness dia nitombo hatramin'ny 4 segondra (dia 3 segondra).
Ny Embers of the Fiend's Raiment dia miteraka sombin-javatra 6 Soard Shard rehefa voadona mafy amin'ny Incinerate, araka ny fikasana.
Nampitombo ny fahafahan'ny Enduring Blow hampihatra ny vokatry ny Colossal Smash hatramin'ny 25% (dia 15%) ary ny faharetany ho 6 segondra (dia 5 segondra).
Battlelord dia manomboka amin'ny Overpower (dia Slam) ary mampihena ny vidin'ny Rage an'ny Mortal Strike anao manaraka amin'ny 15. (raha tokony ho 12 p.).
Ny bonus exploitation Mortal Strike Exploiter dia nitombo hatramin'ny 50% (dia 25%) ary, ho an'ny mpiady Venthyr, 36% (dia 18%).
Ny faharetan'ny Cadence an'i Fujieda dia nitombo hatramin'ny 12 segondra (dia 8 segondra).
Ny faharetan'ny Will of the Berserk dia nitombo hatramin'ny 12 segondra (dia 8 segondra).
Ny Reckless Defense izao dia mitarika ny tsindry Rampage rehetra (dia ny fiakarana henjana Rampage) ary mampihena ny sisa tavela amin'ny Recklessness and Enraged Regeneration amin'ny 1 segondra (dia 3 segondra).
Novaliana indray ny valifaty: manome andraikitra anao ny Shield Block mandritra ny 4 seg sy Revenge!, Ankoatry ny famoahana 20. ny fahatezerana.
Unbreakable Will koa izao dia manome fiampangana Shield Wall fanampiny.
Ny fahasimban'ny Seismic Reverb dia nitombo hatramin'ny 75% (dia 40%).
Nampitombo ny haben'ny sainam-pirenena Horde ao Warsong Gorge sy Twin Peaks mba hifanaraka amin'ny an'ny Alliance.
Ny fanafihana mifantoka sy ny fanafihana mahery vaika izao dia mampitombo ny fahasimbana alaina amin'ny 10% isaky ny stack ary mampihena ny fanasitranana alaina 5% isaky ny stack ao Warsong Gulch, Twin Peaks, ary ny mason'ny rivodoza.
Ny sainam-pirenena misambotra hita any amin'ny faran'ny Zephyr Canyon dia miseho ankehitriny aorian'ny 14 segondra manomboka ny fiandohan'ny ady, ary ny saina afovoany dia miseho aorian'ny 18 segondra manomboka ny fiandohan'ny ady (tsy toy ny teo aloha, raha teo am-piandohan'ny kianjan'ny ady) . Fanombohana).
Namboarina bibikely izay nanakana ny fampiasana sainam-piadiana tany amin'ny battlefield Wintergrasp sy Ashran.
Tsy mila ampiasaina intsony mandritra ny vanim-potoana fiomanana amin'ny Battlegrounds Preparation dingana ny fitiavam-bola, ny herim-po, ny ady an-trano, ny hatezerana mialoha, ary ny ampongatsoan'ny fahatezerana sy ny amponga.
Ny isan'ny mpilalao farafahakeliny isaky ny fizarana dia 35 ankehitriny (30).
Ny mpanentana manomboka dia 175 ankehitriny (150).
Mba hanomezana lalana mora kokoa ny roa tonta mankany amin'ny Star Tubers sy Song Flowers, dia samy hiara-hiteraka ao anaty ala maizina sy ny faka faka.
Nihena ny isan'ny Artifact Shards takiana amin'ny fiantsoana an'i Kronus sy Fangraal ho 1500 (dia 3000).
Tower Mages an'ny Horde sy Alliance izao dia mitaky 30 fanamafisana rehefa maty (dia 50).
Namboarina ny ody majes an'ny Horde sy Alliance:
Winds of Northrend dia miatrika ny 15% amin'ny fahasalamana farany kendrena amin'ny fahasimban'ny Frost.
Frostbolt izao dia mitana ny 8% amin'ny fahasalamana faratampony amin'ny fahavoazana an'i Frost.
Frostbolt Volley izao dia mitana ny 15% amin'ny fahasalamana faratampony amin'ny fahavoazana ao Frost.
Tsy mandefa Polymorph intsony intsony.
Jeron Fulgor - Tower Mage an'ny Horde
Fireball izao dia mitana ny 8% amin'ny fahasalamana faratampony ho an'ny fahasimban'ny afo.
Burning Nova izao dia mifandraika amin'ny 15% amin'ny fahasalamana faratampony ho an'ny fahasimban'ny Afo.
Ignition izao dia miresaka momba ny 1% amin'ny fahasalamana faratampony ho an'ny fahasimban'ny afo.
Ny ody voalohany Living Bomb dia miresaka momba ny 5% amin'ny fahasalamana faratampony amin'ny fahapotehan'ny afo.
Ny fipoahana baomba velona dia mahatratra ny 15% amin'ny fahasalamana faratampony ho an'ny fahasimban'ny afo.
Ny Bomba velona dia tsy mandroaka ny fahavalo intsony rehefa mipoaka.
Ny Magma Blast navoakan'ny Jeron's Summoned Lava Fury dia miresaka momba ny 5% amin'ny fahasalamana faratampony amin'ny fahapotehan'ny afo.
Ny fahasalaman'ny mpandefa fanjaitra dia nitombo 40%.
Ny fahasalamana Horde sy Alliance Commanders dia nitombo 50%.
Ny fahasalaman'ny demolishers dia nitombo 25%.
Ny fahasalaman'ny catapult dia nitombo 100%.
Ny fahasimbana takiana amin'ny fandravana ny rindrin'ny trano mimanda dia nitombo 20%.
Ankehitriny ny ekipa mpanafika dia manomboka ny ady amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny atrikasa ny Broken Temple sy ny Sunken Ring.
Ny fahasalaman'ny Rindrin'ny Fandresena amin'ny Ririnina, ny Rindrin'ny Fanjakan'ny Ririnina, ary ny vavahady Winter Conquest Keep Gate dia nihena 20%.
Ny fandravana tilikambo dia mampihena ny faharetan'ny lalao amin'ny 8 min (dia 5 min).
Ny fahafahan'ny Steam Dash avy amin'ny Siege Engines dia manimba fahasimbana mitovy amin'ny 20-35% amin'ny fahasalaman'ny mpilalao (dia 30-45%).
Ny fahafahan'ny Demolisher's Rock Throw dia mitaky fahasimbana mitovy amin'ny 20-25% amin'ny fahasalaman'ny mpilalao (dia 36%).
Ireo demolisera dia hiatrika fahasimbana mitohy hatrany rehefa mikapoka ny rindrina sy ny tilikambo.
Ireo mpilalao tsy voatanisa rehetra eny an-tsahan'ady (ao anatin'izany ireo izay niditra tamin'ny lalao afovoany) dia hasandratra aorian'ny 5 min.
Ashen Sanctification (Venthyr Paladin), Bastion Spear (Kyrian Warrior), Echoing Arrow (Kyrian Hunter), ary Wild Spirits (Night Sylph Hunter) VFX dia tsara kokoa ankehitriny rehefa hain'ireo mpilalao fahavalo.
Nesorina ny fiatraikany tampoka rehefa niantso fiantsoana vonjimaika niaraka tamin'ny Raise Dead (Laharana 1) ao amin'ny PvP.
Ny debuff Sated avy amin'ny Rune of Bleeding dia esorina ankehitriny rehefa miditra amin'ny tranga PvP.
Namaha olana iray izay tsy hampihemotra ny tanjona intsony ny vokatry ny talenta Grab PvP an'ny Illidan.
Ny fampiantsoana ny fanahy (Sylphs amin'ny alina) dia tsy mandroaka ny Full Moon sy ny Frenzy Feral amin'ny famerenana amin'ny laoniny na ny Guardian Druids amin'ny ady amin'ny mpilalao fahavalo.
Ny talenta PvP Roar of Sacrifice dia tsy azo ampiasaina intsony raha maty ny biby fiompy mpihaza na eo ambany fanaraha-mason'ny vahoaka.
Ny talenta PvP Ice Form dia tsy mizara ny cooldown manerantany intsony mba hifanaraka amin'ny Icy Veins, ny fahaiza-soloiny.
Ny lakandranon'i Ice Rush dia miasa tsara ankehitriny miaraka amin'ny endrika PvP Ice Form.
Ny fantsom-boankazo Nether Precision sy Arcane Prodigy dia miasa tsara miaraka amin'ny PvP talenta Arcane Empowerment.
Ny talenta Divine Vision PvP dia mampihena ny cooldown an'ny Aura Mastery 1 min (fa tsy manome aura Shadow Resistance).
Ny talenta Ultimate Sacrifice PvP dia mahatonga ny Blessing of Sacrifice haharitra 6 segondra ankoatry ny vokany efa misy.
Namaha olana iray izay indraindray ny fanadiovana talenta PvP an'ireo malemy indraindray dia tsy hahavita hanafoana ireo debuff isan-karazany.
Steed of Glory (PvP Talent) dia manome hery fiarovana amin'ny faka sy ny fandrika fotsiny (izay mifanohitra amin'ny vokatry ny fanaraha-maso ataon'ny vahoaka).
Namboarina bibikely izay nanakana ny làlan'ny didim-panjakana tsy nisy fiatraikany tamin'ny talenta PvP an'ny Mpiambina ny Mpanjakavavy Hadino.
Namaha olana iray izay tsy nampiharina tamin'ny paladin ny bonus fitsanganana amin'ny maty avy amin'ny talenta PvP talenta farany rehefa maty ny mpiara-dia aminy.
Nesorina izao i Greater Fade rehefa manandrana misambotra lasibatra PvP ny mpilalao.
Ny fanafoanana faobe dia tsy manafoana ny Greater Fade intsony.
Ny talenta PvP Greater Fade dia tsy nofoanana intsony raha ny Bomban'ny Mind Mind na rehefa ny talenta Shadowfred no miatrika fahasimbana.
Ny PvP Talent Control sy Conquer dia tsy afaka manafoana ny Adrenaline Rush intsony miaraka amin'ny fitomboan'ny faharetany.
Ny talenta Shadow Duel PvP dia tsy afaka atsipy lasibatra intsony miaraka amin'ireo tsimatimanota miasa toy ny Ice Block na Divine Shield.
Manelingelina ireo mpilalao mandefa ny tanjona kendren'ny PvP i Hex ankehitriny raha toa ka mora tratran'io ody io ny mpilalao.
Ny cooldown an'ny talenta PvP Amplify Curse dia nahena ho 30 segondra (45 segondra).
Ny talenta PvP Circle of Casting dia tsy manakana intsony ny Endless Resolve tsy hanome ny hery fiarovanao.
Ny talenta PvP Demon Armor dia mampitombo ny fiadiana fiarovana 160% (dia 90%).
Nanamboatra bug izay mamela ny talenta Quick Contagion PvP hampiasaina raha mbola eo ambanin'ny vokatry ny fahaizan'ny olona mifehy.
Ny talenta Barbary PvP dia tsy mamerina intsony ny fiampangana ny Heroic Leap rehetra rehefa nampiasaina tamin'ny vokatra Legendary Leap.
Namboarina bibikely izay nahatonga ny talenta War Banner PvP hamarana aloha loatra raha toa ka mavitrika ny Banners Ady.
Namboarina bibikely izay nahatonga ny talenta Advanced PvP ho diso fanjifana noho ny taratra taratra fahasimbana hita taratra sy ny faritry ny ody vokadratsiny.
Misy kaonty tsy voafidy kaonty vaovao nampiana ao amin'ny Ve'nari izay manambara ireo teboka teleport ny rojo azo zahana mandeha lavitra any Torghast. Amin'izany fomba izany, ny mpilalao manana tahotra haavo dia ho afaka hiampita haingana azy ireo.
Ny fahasalamanana sy ny isan'ny Anima Devourers takiana amin'ny dingana 1 amin'ny fihazana fanahy manana elatra dia nihena.
Torghast, Tilikambon'ireo voaozona
Azo atao izao ny mijery famaritana fohy ny elatra tsirairay alohan'ny hanombohana ny fanafihana any Torghast.
Ny haavon'ny entana manokana dia atolotra ho an'ny fahasahiranan'ny sosona tsirairay mba hampitomboana ny fahafahan'ny fahombiazan'ny fanafihana.
Ny isan'ireo fahavalo dia nahena tamin'ny gorodona maro.
Ny Stone of Parliament dia mampiakatra ny hafainganam-pandeha 50% (30%) ary mampitombo ny vintana 25%. Azo azo in-1 (fa tsy 2).
Herin'Anima Vaovao: Desolate Chitin (tsy mahazatra) - Ny nofo mandrafitra dia mitelina fahasimbana 50% bebe kokoa. Azo azo in-3.
Ny Malevolent Stitching dia mampitombo ny stat voalohany an'ny mpilalao amin'ny 20% (dia 8%) ary tsy fahita firy ankehitriny (dia tsy mahazatra). Azo azo in-1 (fa tsy 3).
Nesorina ny Musophobic Femur.
Herin'Anima Vaovao: voa masiaka mangatsiaka (Epic) - Ny endrika fanahy no mampihetsika ny fahavalo ao anatin'ny 12 metatra ihaonana sy toerana ivoahana mandritra ny 6 seg. Azo azo in-1.
Hery Anima vaovao: Ethereal Seed Wild (Tsy mahazatra) - endrika fanahy sy fahitana ary tsy fahitana manasitrana anao amin'ny 20% amin'ny fahasalamanao farany ambony. Azo azo in-2.
Nesorina ireo nofy miraikitra sy nofinofy vita amin'ny kristaly.
Ny Twisted Key dia mampihena ny fotoana fandefasan'ny Shadow Gate 20% (10%) ary ny cooldown isaky ny stack 6 segondra (dia 3 segondra). Mitambatra hatramin'ny in-5 (dia in-10).
Hery Anima Vaovao: Entropic Puddle (Epic) - Ny fiatrehana fahasimbana amin'ny lasibatra amin'ny Fahafatesana sy ny fahalovana dia mampitombo ny fahasimban'izy ireo 2%. Mikatona ity vokany ity.
Hery Anima Vaovao: Bone Hoarder (tsy fahita) - Ny mahafaty dia mampihena ny fahavoazana nalainao tamin'ny 20% nandritra ny 10 seg ary namelombelona ny Wanderer na Magus an'ny Maty nandritry ny 1 min.
Ny fahasimbana nataon'ny minion niantso an'i Bone Hoarder sy Bone Harvester dia nitombo tokoa.
Hidden Emitter nohavaozina: Ankehitriny mampitombo ny famokarana Runic Power hatramin'ny 100% eo ambanin'ny vokatry ny Anti-Magic Shell na Anti-Magic Zone anao.
Monstrous Brew nohavaozina: mampitombo ny fahavoazana sy ny hafainganam-pandehan'ity fanafihana ity ho 10% mandritra ny 8 segondra isaky ny mandefa Death Coil ianao.
Exterminator dia nohavaozina: izao dia manome fiampangana fanampiny 2 max an'ny Lethal atrakture. Ankoatr'izay, ny famonoana Maw Rat dia hamerina ny fiampangana rehetra. Mipetaka in-2.
Ny Ward Darkreaver izao dia mampitombo ny faharetan'ny Anti-Magic Shell amin'ny 3 seg ary tsy mampiakatra intsony ny fihenan'ny fahasimbana amin'ny ody Anti-Magic Zone.
Dark Reaver Lens spell taratra izao dia mihatra amin'ny Anti-Magic Shell.
Ny Insidious Putrefaction izao dia manana fiampangana fanampiny ary tsy manome 10% intsony ny fihenan'ny fahasimbana ao anatin'ny Fahafatesanao sy lo anao.
Ny Terrain mahafaty izao koa dia mampihena ny fahavoazana azonao amin'ny fahavalo 10% ao anatin'ny fahafatesanao sy fahalalanao.
Ny fetra tsy mety vaky dia mampitombo ny Frost sy ny fahasimbana ara-batana ataonao amin'ireo fahavalo traboina amin'ny 15% ary tsy mampitombo ny faharetan'ny Chains of Ice intsony.
Ny Poker misy ra dia mampitombo ny fahasimban'ny sorona fanekena 400% (dia 300%) ary mampihena ny cooldown an'ny Raise Dead hatramin'ny 20 segondra (dia 25 segondra).
Lich Robe dia mampihena ny cooldown an'i Born Lich 4 segondra (10 segondra) isaky ny 10. Nandany Runic Power (fa tsy rehefa mampiasa Death Strike). Mipetaka in-2 (in-3).
Drag of Force dia novana anarana hoe Deadly Hook ary misy fiatraikany fanampiny izay mahatonga ny Deadly Pull hisarika anao mankany amin'ny lasibatra.
Ankehitriny dia tsy dia fahita firy ny biby goavam-be mpampihorohoro.
Nesorina ny lesona momba ny Tompon'ny fahafatesana, ny lova navelan'ny Tompon'ny fahafatesana, ary ny fitaovam-piadiana miteraka alahelo.
Ny stonescraper dia manasitrana 6% isan-tsegondra (dia 3%).
Ny Shifting Seal dia mampihena ny cooldown an'ny Metamorphosis amin'ny 30% (dia 15%). Mitsivalana hatramin'ny in-3 (dia 4).
Ny fahasimban'ny Ghost Iris dia nitombo 5% (dia 1%).
Ny Seeker's Rage dia mampitombo ny fahasimban'ny Demon Blades, Demon Bite, na Split anao amin'ny 2% isaky ny stack (dia 20%) rehefa nanimba Phylactery Ashen, ary ny vokany dia tsy lany intsony rehefa mandroaka Demon Blades, Demon Bite na Split.
Furious Hoof izao dia mampihena ny cooldown an'i Morph rehefa mamono Rat ao amin'ny Maw 6 segondra (fa tsy manitatra ny faharetany).
Tsy mandray simba intsony ianao avy any Furywing raha tsy mahavita miatrika fahasimbana i Fel Charge na Hell Strike.
Ny lavenon'ny fanahy sorona dia mampitombo tsara ny fahasimban'ny fahaizan'ny Kyrian Elisian Decree.
Namboarina bibikely izay tsy dia nahatonga an'i Druids hijanona ao anaty toerana gaga raha maty izy ireo tao anatin'ny Pod Keeper (Soul Link to Dreamweavers).
Ny kitapo rat-maso dia tsy azo sakanana intsony miaraka amin'ny fe-potoana fohy kokoa Soraty momba ny fahatezeran'ireo biby.
Namaha olana iray izay nahatonga ny Fogged Glass sy ny Amplifying Mirror hijanona ho mavitrika indraindray rehefa tapitra ny Redirection.
Hery Anima Vaovao: Gravity Dynamo (Epic) - Ny fanoherana, ny fakany na ny tsy fahafahan'ny fahavalo dia manome fahavoazana 50% fanampiny amin'ny ody Fire, Arcane, ary Frost mandritra ny 8 segondra.
Hery Anima Vaovao: Chronomaniac Hourglass (tsy mahazatra) - Mandritra ny fotoana fanovana dia mahazo Time Warp ianao sy ny reflexes anao.
Hery Anima Vaovao: fanahy maloto an'ny mpamosavy (tsy mahazatra) - Ice Block dia tsy manana cooldown.
Hery Anima Vaovao: Ward Bewitching (Tsy mahazatra) - Ny fahasimbana ateraky ny sakana dia manome anao hatramin'ny 20% nitombo saina, mifototra amin'ny habetsaky ny fangarony.
Herin'Ny Anima Vaovao: fampianaran-dratsy (mahazatra) - Ny fahasimban'ny Pyroblast, Flurry, ary Arcane Barrage dia nitombo 25%.
Dimensional Blade dia mamerina ny cooldown of Blink rehefa ampiasaina amin'ny alàlan'ny fahavalo ary, raha alefa amin'ny alàlan'ny voalavo Maw, dia hamono azy eo noho eo (fa tsy hamono eo noho eo ny voalavo Maw ary hanome fiampangana 3 Blink).
Sapphire Prism izao dia miantso taratra taratra 2 marina kokoa isaky ny stack (dia 1) ary fahita ankehitriny.
Insidious Freeze dia miasa izao nefa tsy misy ba kiraro mafana foana ary azo vidiana amin'ny fotoana rehetra.
Ny Torment maharitra Venthyr Anima Power izao dia mampitombo ny fitaratry ny fahasimbana amin'ny fampijaliana 25% (dia 10%).
Ny herin'ny anima an'ny Venthyr Malevolence dia mahatonga ny cooldown of Mirrors of Torment hamerina raha toa ka maty eo ambanin'ny vokany ny tanjona (fa tsy tokony hanome ny kapoka farany amin'ny iray amin'ireo fitaratra).
Nesorina ny mpiasan'i Maldo's Enchanted staff, ny Malch's Enchanted Staff, ny Tome of Zoomancy, ary ny keju manintona
Hery Anima Vaovao: Teknika maizina (tsy mahazatra) - Ny fahavalo voakasiky ny Mind Bomb na ny Psychic Scream dia miteraka fahasimbana mitovy amin'ny 5% amin'ny fahasalamanao isaky ny 1 seg. Ity fahasimbana ity dia tsy manelingelina ny baomba Mind na Scream Psychic.
Hery Anima Vaovao: Void Soul Seal (Tsy fahita) - Famonoana fahavalo amin'ny alokaloka Shadow: Miantso mpiambina Void Anima mandritra ny 1 minitra ny fahafatesany izay mamoaka an'i Void Lash, miatrika fahasimbana bonus 100% amin'ireo fahavalo manana fahasalamana mihoatra ny 50%.
Hery Anima Vaovao: Archon Soul (Uncommon) - Ny Power Infusion dia mampitombo 100% ihany koa ny fahasimbana sy ny fanasitranana tsindraindray.
Hery Anima Vaovao: Hood of Influence (Tsy mahazatra) - Afaka mifehy ny toetranao ianao izao mandritra ny Mind Control, fa miaraka amina cooldown 30 segondra.
Herin'Ny Anima Vaovao: atody maivana (tsy mahazatra) - Ny famelezana / famelezana ara-tsaina dia manana vintana 15% / 5% hanome anao Power Infusion.
Hery Anima Vaovao: Fitahiana avy amin'ny Pretra mianjera (Fahita) - Ny fanipazana afo masina na fipoahana saina dia mampitombo ny fahasimbana na ny fanasitranana ny aretina Devouring Plague manaraka anao amin'ny 30%, ny Penance manaraka anao amin'ny 30%, na ny sazinao manaraka amin'ny 60%. Mikatona io vokany io, saingy tsy miverina miverina ny faharetany.
Ny faharetan'ny ody vy dia nitombo 80% (50%).
Tsy azo atolotra an'ny mpilalao tsy mahalala Hood of Influence intsony ny Threads Puppeteer.
Ny vintana fampidirana an'i Lombrioido isaky ny stack dia nitombo hatramin'ny 5% (dia 3%).
Ny fonon-tànan'ny Mindmaker izao dia mampitombo ny fahasimban'ny Mind Games amin'ny 20% (nahena ny hafainganam-pandeha).
Vandal's Fervor izao dia azo atao in-3 (dia 1).
Ny psychic Satchel, Soul Sapper, ary Ghostly Healing Art dia nesorina.
Estacarsis dia mitarika ankehitriny rehefa mandefa Shadow Word: Fanaintainana amin'ny alàlan'ny Vampiric Touch amin'ny alàlan'ny talenta Shadow Misery.
Namaha olana iray izay tsy nampitomboan'ny Silent Footpads ny fahasimban'ny mozika.
Ireo Footpads mangina dia azo ampandehanana mangingina amin'ny fampiasana Vanish.
Hery Anima Vaovao: Tesla Coil (Epic) lany andro - Mahazo ny vokatry ny Storm Guard isaky ny 15 segondra.
Herin'ny Anima vaovao: Core Elemental Core (tsy mahazatra) - Elemental: mampitombo ny faharetan'ny Fire Elemental na Storm Elemental anao amin'ny 50%. Fanatsarana: Mampitombo ny faharetan'ny Feral Spirit amin'ny 100%. Famerenana amin'ny laoniny: Rehefa apetrakao ny Spirit Link Totem dia manasitrana avy hatrany ireo mpiara-dia aminao rehetra ianao ho an'ny 15% amin'ny fahasalamany faran'izay betsaka ary manimba fahasimbana mitovy amin'ny 15% amin'ny fahasalamany lehibe indrindra amin'ny fahavalo rehetra. Mitsivalana hatramin'ny in-2.
Herin'Anima vaovao: tavoahangy Spiral Maelstrom (mahazatra) - Fototra: Mampitombo ny fahasimban'ny horohoron-tany sy ny fikorontanan'ny tany. Fanatsarana: Mampitombo ny fahasimbana nosedraina sy ny fanasitranana vita tamin'ny fitaovam-piadiana Maelstrom. Famerenana amin'ny laoniny: mampijaly fahavalo ny fahavalo amin'ny orana manasitrana anao. Miorina hatramin'ny in-3 izy.
Storm Duct izao dia mampitombo ny fahasimban'ny natiora sy ny Frost amin'ny 50% (avy amin'ny Lightning Bolt sy ny Chain Lightning).
Tsunami Relic izao dia mampitombo ny fanasitranana vita amin'ny 50% (fa tsy mandefa ody fanasitranana haingana kokoa).
Ny Blood of Heroes dia izao koa no mahatonga ny fitiavanao Bloodlust na Heroism voalohany ho an'ny zavamaniry tsirairay mba tsy hampisy ny cooldown-ny. Ary tsy fahita firy izao.
Ny fahasimban'ny Deathseer Choker dia nitombo ary ny fanasitranana natao dia nitombo 10% isaky ny totem (dia 5%).
Ny fon'ilay mpahita ny fahafatesana dia nohavaozina. Elemental and Restauration: Chain Lightning dia mahatratra tanjona telo fanampiny, ary ny fahasimban'izy ireo dia nitombo 3% isaky ny mitsambikina. Fanatsarana: Lava Lash izao dia manaparitaka ny Flame Shock amin'ny tanjona 20 eo akaiky eo, ary ny fahasimban'ny Lava Lash dia nitombo 5%.
Nesorina ny Ghostly Bone sy ny Spirit Shield.
Torch of Detonation no nohavaozina: Mampitombo ny fahasimbana isaky ny antontan'isan'ny talenta Shadow Bolt, Demon Core, Incinerate, ary Drain Soul 75%. Miorina hatramin'ny in-3 izy.
Inferno Spikes dia nohavaozina: mampitombo ny fahasimban'ny voan'ny kolikoly, ny implosion ary ny ranon'orana amin'ny 75%. Mitsivalana hatramin'ny in-4.
Ny Pact of Thickness dia mampitombo ny fahasalamana sy ny fahasimban'ny demonia 50% (fahasalaman'ny demonia fotsiny).
Ny faharetan'ny buffer Teleport Fragment dia nitombo hatramin'ny 15 segondra (dia 10 segondra).
Ny faharetan'ny aloky ny tavoahangy dia nitombo hatramin'ny 30 segondra (dia 15 segondra).
Visage of Lethality dia nohavaozina: Rehefa tratry ny fanafihana fiara tampoka dia ampitahory ny fahavalo rehetra manodidina ny 8 seg. Ity vokatra ity dia mety hitranga indray mandeha isaky ny 45 segondra.
Nesorina ny pact of Infernal Flames sy Crystal of Perpetual Scroll.
Herin'Ny Anima Vaovao: Heavenly Hold Glory (Tsy mahazatra) - Mahery fiampangana 2 nahazo fiampangana fanampiny. Azo raisina in-1.
Herin'Anima Vaovao: Blade of the Seaskorn (Tsy fahita) - Spear Demoralizing Scream (Protection) na Piercing Howl (fitaovam-piadiana sy fahatezerana) rehefa sendra ny Heroic Leap ianao. Azo azo in-1. Repulsive Necklace dia manisy fahasimbana ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 15 metatra ho anao isaky ny 3 segondra raha mbola miasa kosa ny Banner Conqueror. Azo azo in-2 (fa tsy 3).
Hery Anima Vaovao: Runstones namboarina (Tsy mahazatra) - Ny Berserker Rage dia mampitombo ny fahasimban'ny Overwhelm, Raging Blow, na Revenge amin'ny 40%. Azo azo in-3.
Herin'Anima Vaovao: Thorium Fork (tsy mahazatra) - Ny tadio dia miteraka 10. Fahatezerana amin'ny fiadiana sy fiarovana ary 4 p. hatezerana fanampiny noho ny fahavinirana. Azo azo in-3.
Herim-pahefana Anima Vaovao: Ny tànana rava an'i Gargolmar (tsy mahazatra) - Ny fitokonan'ny Fandresena dia mampihena ny sisa tavela amin'ny Heroic Leap amin'ny 10 seg. Azo azo in-3.
Herin'Anima Vaovao: Sisa taloha (mahazatra) - Ny heroic Leap dia manaparitaka ny tany alehanao, miatrika fahasimbana ara-batana mandritra ny 10 segondra amin'ireo fahavalo ao anatin'ny 16 metatra. Azo azo in-4.
Ny Braw Knuckles an'ny Brawler dia mampitombo ny famokarana hatezerana amin'ny 25% (dia 20%). Azo azo in-4 (fa tsy 5).
Edge of Hatred dia mampitombo ny fahavoazan'ny Rampage, Mortal Strike, ary Shield Slam amin'ny 25% (dia 20%). Azo azo in-4 (fa tsy 5).
Nampitombo ny vintana ho an'ny Fan of Smuts handefa ny tadio ho 100% (dia 33%). Azo azo in-1 (fa tsy 3).
Ny Succulent Carpaccio dia mampihena ny cooldown an'ny Ignore Pain amin'ny 3 segondra ho an'ny fitaovam-piadiana sy fahatezerana. Tsy miova ho an'ny Fiarovana.
Ravenous Decimating Blade dia mampitombo ny fahasimban'ny fahaizan'ny Venthyr manameloka 50% (dia 100%).
Ny fahasimban'ny bonus Inertia mifoka sigara dia nihena hatramin'ny 100% (dia 200%), ary ny faharetany dia nitombo hatramin'ny 6 segondra (dia 4 segondra).
Soles miparitaka, Speck of Rage, ary ny didim-panjakana.
Ny fiasan'ny bokotra select select dia novaina ho iray monja, ary ny bokotra iray hanovana fanitarana dia nampiana ao amin'ny menio.
Fanamarihana ho an'ny mpamorona: Nahazo valin-kafatra avy amin'ireo mpilalao tsy dia nahatadidy ny tutorial switch switch izahay, noho izany dia nanatsotra ny fizotrany izahay ary nanampy fomba faharoa hanatanterahana izany.
Nanazava ny faritra sy ny fikorianan'ny karazan'olona.
Fanamarihana ho an'ny mpamorona: Nanova ny fizotrany mifototra amin'ny fanehoan-kevitra izahay mba hanazavana sy hamahana ny olana raha voafidy ny faritra diso na tsy misy endri-tsoratra amin'ny faritra.
Namboarina bibikely izay nahatonga ny atin'ny lahatsoratra tsy haseho raha toa ka tsy mifanaraka ny fitenin-telefaona sy ny fitenin'ny lahatsoratra.
Namboarina bibikely izay nisy fiatraikany tamin'ny fiantsoana sy iraka.
Fanavaozana isan-karazany ho an'ny adventures.
Raha hijery ireo naoty fanavaozana ny atiny rehetra dia kitiho eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » About us » Vaovao farany 9.0.5 naoty
Oribos Exchange sa The Undermine Journal Iza no mpijery lavanty tsara indrindra?